DLULA Kefallinia FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 319 MB
Play 18 684
Umbhali: Dimitris Ntaskas
Beautiful nobuhle bendawo photoreal esiqhingini Kefalonia kanye sezindiza yayo in Greece. Ukuze uthole lapho nje faka Kefallinia emkhakheni wezindiza we FSX/P3D.
Isiqhingi Cephalonia noma Kefalonia noma Cephallonia noma Kefallonia owaziwa nangokuthi Kefallinia noma Chephalonia isiGreki: Κεφαλονιά, Κεφαλλονιά; Italian: Cefalonia), iyona enkulu kunazo zonke ye-Ionian Islands entshonalanga ye-Greece. Libuye iyunithi lesifunda ehlukile ye-Ionian Islands esifundeni, futhi okuwukuphela kukamasipala unit lesifunda. Inhloko-dolobha ka-Cephalonia kuyinto Argostoli. (Wikipedia)
I-Cervino ID v3 FSX & P3D
Fiji Photoreal Iphakheji Western Western FSX & P3D
IBig Bend National Park Part2 FSX & P3D
Ama-Craters of the NMP FSX & P3D